အရက်သောက်ရာမှ (၃)ရက် အိပ်ပျော်သွားသူ ရဲ့ ပြန်နိုးလာချိန် မှာ သိလိုက်ရ တဲ့ အဖြစ်ဆိုး.
အ ရက်သောက်ရာမှ (၃)ရက် အိပ်ပျော်သွားသူ ရဲ့ ပြန်နိုးလာချိန် မှာ သိလိုက်ရ တဲ့ အဖြစ်ဆိုး ဦး ​ဇော်မင်းဦး အသက်(၄၇) (ဘ)ဦးလှမြင့်(မိ)​ဒေါ်ရင်နုဘုရားကြီးကုန်း​ကျေးရွာ၊ ပုသိမ်အ​ရှေ့မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်း။ဖျာပုံမှာ အရက်​သောက်ရာမှ (၃)ရက်ခန့် အိပ်​ပျော်သွားပြီပြန်နိုးလာ​တော့ ကျိုက်ခမီမှ ဘုံ​ကျောင်း(ငါးဖမ်း​လှေ)​ပေါ်​ရောက်​နေ​ကြောင်းသိရ။ လာ​ရောက်ပို့ဆောင်သူ ပွဲစားမခိုင်မှ​ငွေ (၇)သိန်း ယူ​ဆောင်သွားခဲ့ပြီး […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်တော့မှ ပျောက်မသွားနိုင်ကြောင်း WHO တာဝန်ရှိသူပြော.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်တော့မှ ပျောက်မသွားနိုင်ကြောင်း WHO တာဝန်ရှိသူပြော” zawgyi ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်တော့မှ ပျောက်မသွားနိုင်ကြောင်း WHO တာဝန်ရှိသူပြော Thursday, May 14, 2020 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်တော့မှ ပျောက်မသွားနိုင်ကြောင်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူတွေဟာ ၎င်းနဲ့အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရန် လေ့လာသင်ယူကြရလိမ့်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း […]
မေလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ဒါလေးလုပ်ကြည့်ကြပါ
၁၄ရက်၅လ ၂၀၂၀ ကြာသပတေး နေ့ မနက် ၈နာရီ မှစ၍ ညနေ ၃ နာရီအတွင် မိမိအဆင်ပြေချိန်တွင် ငရုတ်ကောင်း ၂၇ လုံး ပိတ်ဖြူထဲ ထည့်ကာ ထုပ်လိုက်ပြီး ဆီမီးခွက် အပြည့် နမ်းဆီ ထည့်ကာ ငရုတ်ကောင်းထုပ်အား စိမ်ထား အထက်ပါနေ့ ညမှောင်စပျိုးချိန် […]
ဖုန်းသုံးစွဲနေစဉ် မိုးကြိုးပစ်ချရာမှ မီးလောင်သေဆုံး….
ဖုန်းသုံးစွဲနေစဉ် မိုးကြိုးပစ်ချရာမှ မီးလောင်သေဆုံး ယနေ့ ၁၃.၅.၂၀၂၀.မွန်းလွဲ၂:၂၀အချိန်မြဝတီမြို့နယ်၊မဲပလဲ့ကျေးရွာအုပ်စု ထီးချားရားရွာတွင်..၊ (၂၅)နှစ် အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖုန်းသုံးစွဲနေရင်း လျှပ်စစ်မိုးကြိုးပစ်ချရာ သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းသိရသည် ။ သေဆုံးသူ တစ်ကိုယ်လုံး မီးလောင်ဒဏ်ရာရလို့ မဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကူးယူရေးသား တင်ဆက်လိုက်ပါသည် ။ ..ဘီဝမ်း ဖုနျးသုံးစှဲနစေဉျ မိုးကွိုးပဈခရြာမှ မီးလောငျသဆေုံး […]
ဆီးချိုပျောက်တဲ့ ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
ဆီးချိုပျောက်တဲ့ ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ် ဖွားခင် ပြောတဲ့ ဆီးချိုကျဆေး ဆေးနည်းလေးပြောပြမယ်နော် … ဖွားမိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ခွဲခန်းဝင်ခါနီး ဆီးချိုတွေတ အားတက်ေ နလို့ ခွဲမဲ့အချိန် ရွေ့ထားရတယ်။ ဒါနဲ့ ဘေးအခန်းက အသက် ၇၀ အရွယ် အဖွားတစ်ယောက်က ဆေးနည်းလေးပေးတယ်။ […]
အာရုံကြောအားနည်းခြင်းအတွက် ရောဂါနဲ့ဆေးတွေ့ပါစေ အာရုံကြော အားနည်းခြင်းအတွက်ြ မန်မာ့ဆေးနည်း ကောင်းလေးတခုပါ ပျားရည် စစ်စစ်နဲ့ သံပုရာသီး တစ်လုံး လိုအပ်ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ သံပုရာသီးကို အရည်ညှစ်ယူပါ။ ၄င်း သံပုရာရည်နှင့် ဆတူ ပျားရည်စစ်စစ် ကို ရောပြီးသောက်သုံးပေးပါက… အာရုံကြောများပြန်လည် သန်စွမ်း […]
ကျွဲရိုင်း ချိုချဉ် တစ်လုံး၊ ကြက်ဥ တစ်လုံးနှင့် ငွေကျပ် ၁၀၀ စီ ပေး၍ သားမယားအဖြစ် ၃ ကြိမ် ပြုကျင့်ခဲ့.
Maskကြာကြာတပ်လို့ မူးဝေလာလျှင် ဒီလိုဖြေရှင်းပါ.
Maskကြာကြာတပ်လို့ မူးဝေလာလျှင် ဒီလိုဖြေရှင်းပါ Mask N95 ကို ၁ နာရီ ဆက်တိုက် မတပ်ပါနှင့်..၁ နာရီကျော်လျှင်ေ ဘးကင်းတဲ့ေ နရာမှာ နာရီဝက်ခန့် Maskဖွင့်ပြီး နားပါ………… အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်၁ နာရီကျော် ဆက်တိုက် တပ်ထားလျှင် သွေးထဲမှာ အောက်စီဂျင် နည်းပြီး အက်စစ်ဓာတ် […]